🥇 ▷ Tani waxay noqon kartaa qaabeynta Xiaomi Mi MIX 3: xasaasi ahaan xayndaab la'aan iyo xasilooni la'aan! (sawir) ✅
Tani waxay noqon kartaa qaabeynta Xiaomi Mi MIX 3: xasaasi ahaan xayndaab la’aan iyo xasilooni la’aan! (sawir)
Xiaomi Mi MIX 3 waxaa horey loogu arkaa bilihii ugu dambeeyay lacago kala duwan oo la sheegay iyo sawiro dhab ah, laakiin sawirada aan maanta soo bandhigno waxay kordhin karaan heerka aamin Qaabkeeda, maadaama lagu aqoonsaday mid ROM sarkaal ka tirsan shirkadda Shiinaha.
Xaqiiqdii, qaar ka mid ah adeegsadayaasha Shiinaha ayaa soo sheegay in mid ka mid ah noocyadii ugu dambeeyay mid cusub MIUI 10 sawirradu waxay ka soo muuqdeen aalad aan waligeed horay loo arkin, taasoo u muuqata inay aad ugu egtahay foomamka ee Mi MIX 3 lagu arkay xanta hore.
Telefonka casriga ahi wuxuu leeyahay soo bandhig weyn oo leh bezels aad u yar, sidii horeba aan horey loogu arkin aaladda Xiaomi. Ma jiraan wax jira feejignaan dhinaca kore ee hore, halka sidoo kale jir hoose waxay u muuqataa inay ka yar tahay moodooyinka jiil hore.
Dhinaca midig ee dhinaca hore ka eegaya waxaa jira shisheeye mugga iyo badhanka loogu talagalayawood on, laakiin waxa ugu yaabka badan ee la yaabka leh ayaa ah midka ka muuqda dhinaca bidix, halkaas oo ay jiri karto badhan u heellan bilowgasirdoonka macmal.
AKHRISO: Qiimaha la soo saaray ee Xiaomi Mi MIX 3
Soo saareyaasha ayaa horay looga tirtirey noocyada cusub ee ROM-ka Shiinaha, laakiin waqtiga yar ee ay heli kareen ayaa ku filnaaday in la sameeyo kuwii hore. isbarbardhiga inta u dhaxaysa Mi MIX 3 iyo Mi MIX 2. Sidaad ku aragtid sawirka ugu dambeeya ee rugta, cabbirrada labada aaladaha waa inay ahaadaan kuwo aad isugu eg, laakiin qeybta hoose ayaa sameyn karta kala duwanaanshaha, iyagoo ka yaraanaya moodeelka cusub.
Intaa waxaa dheer, luminta ee kamarad hore, oo ay tahay in lagu magdhabo kaamirooyin cusub, oo la mid ah kuwii ay isticmaashay Vivo NEX cusub.
Waxaan sugayaa soo bandhigida rasmiga ah, oo imaan kara Sebtember, waxaa naloogu sawiran karaa qaababka Mi MiXX cusub oo waxaan rajeyneynaa in talooyinkii badnaa ee ilaa iyo hadda yimid ka dib loo beddeli karo badeecad rasmi ah. Ma ogoshahay mise waxaad door bidaa inaad kuhesho qaab kale oo qurxoon?